सोल्डरिंग लैंप: अनुप्रयोगहरु र निर्दिष्टीकरण
झुक्याउने तातोले कन्टेनरहरूलाई गर्मीमा राख्छ जुन गैर-ज्वलनशील तरल पदार्थ, मरम्मत, गर्मी उपचार र सोल्डरिंग समावेश गर्दछ। यन्त्रहरू प्रयोग गरिएका ईन्धनहरूको प्रकार अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ। तिनीहरूले मिट्टी, ग्याँस र पेट्रोल बर्नरहरू उत्पादन गर्छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय र सुविधाजनक एक ग्याँस झोलाको ढोका हो। तथापि, पेट्रोल बर्नरहरूको प्रशंसकहरूले आफैंलाई जोड दिए।
आधुनिक उच्च प्रविधिको ग्याँस मिलाएर उपकरणहरू ergonomics र अनुप्रयोगमा विश्वसनीयता जोड्दछन्। तिनीहरू डिस्पोजेबल सिलिन्डरहरू र पुन: भरिएको देखि दुवै काम गर्न सक्षम छन्। झन्डाले आफूलाई प्लास्टिक या धातु आवरणको साथ उपलब्ध गराउँछ।
युनिभर्सल ग्याँस यन्त्रहरू विभिन्न प्रकारका सिलिन्डरहरूबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जुन थ्रेडद्वारा जोडिएका हुन्छन्, जबकि ग्यास कंटेनर कुनै पनि समय विच्छेद गर्न सकिन्छ। यो उपकरण यातायात र भण्डारणको लागि उपयुक्त छ। उपकरण खरीद गर्दा, तपाईंलाई ग्याम्म लैंपमा ध्यान दिनुपर्छ, जुन KEMAP बाट भर्खरको वाल्व सिलिन्डरको सहयोगमा सञ्चालन गरिन्छ।
यी टैंकहरूमा एल्युमिनियम आवरण हुन्छ, जुन तेलको आधारमा बनाइएको तरल पदार्थको विशेष मिश्रण हुन्छ। यस्तो सोल्डरिंग लम्बले यसलाई उच्च टाढाको दक्षता हासिल गर्न सम्भव बनाउँछ, जुन पहिले एसिटिलेनको प्रयोगको साथ मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी यन्त्रहरू पेशेवर वेल्डिंग र सोल्डरमा संलग्न स्वामीहरूको लागि ठूलो मद्दत हुनेछ।
त्यहाँ ग्यास बर्नरहरू छन् जुन पारंपरिक प्रोपेन सिलिन्डरबाट काम गर्छन्। यी यन्त्रहरू शक्ति र विश्वसनीयतामा भिन्न हुन्छन्। तिनीहरू सार्वभौम हुन् र ग्यास स्रोतको छनौटमा निर्भर हुँदैनन्। कामको लागि, तपाईं कुनै पनि लम्बाइको नली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। छत निर्माण कार्य गर्न, यो एक लैंप को चयन गर्न आवश्यक छ, जो लीवर र नजल संग सुसज्जित छ, जसले यसलाई ज्वालामुखी शक्ति को तेज गति को बढावा दिन सक्छ।
ती व्यक्तिहरूका लागि बिजुली उपकरणहरु को मरम्मत मा लगे छन्, तपाईं माइक्रो सोल्डरिंग ईनहरु लाई खरीद सकते हो जसमा ग्याँस टैंक उपकरण भित्र स्थित छ। उपकरणहरू प्रयोग गर्नु अघि, तिनीहरू प्रकाशका लागि डिजाइन गरिएको एक गैसको बोतलबाट शुल्क लगाइएको छ। यो उपकरण पुरुषहरु को लागि कुशल हात संग राम्रो उपहार हुन सक्छ।
एक पेट्रोल झटकाटट 1100 डिग्री सम्म पुग्न एक धेरै उच्च तापमान बनाउन सक्छ। यन्त्रको ज्वाला बल सजिलै सँग समायोजित गर्न सकिन्छ। एक लटकोटच जसले कम ओक्टेन दर्जा वा माटोसिनको साथ पेट्रोलमा सञ्चालन गर्छ, ठूलो सोल्डरिंग इरोन को ताप गर्न वा टाँसिने कोला संग काम गर्न सकिन्छ।
ग्याँस वा पेट्रोलमा चलिरहेको उपकरणहरू तिनीहरूको फाइदाहरू र हानिहरू छन्। दुवै यन्त्रहरूको विशेषताहरू संयोजन गर्न, तपाईं विश्वव्यापी बहु ईन्धन बर्नर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यो उपकरणले कुनै पनि प्रकारको ईन्धनमा काम गर्न सक्षम छ, डीजल देखि ग्याँस सम्म। यो लायकट्राकचको लायक छ एकदम महंगी (7-8 हजार रूबल)।
यो सम्झनु पर्छ कि सबै उपकरणहरू सावधान ह्यान्डलिङ चाहिन्छ र असफल हुन सक्छ। प्रायः, एक पंप ईन्धन इंजेक्शन ईन्धन गर्दछ, र जेट पनि भरा भयो।
ग्याँस स्तम्भ नेभा लक्स 5514: विवरण, निर्दिष्टीकरण, फोटो र समीक्षा
बेडरूम मा खिंचाव छत
तापमान मापने को लागी यंत्रहरू के हुन्?
गोला, बारूद: को कैलिबर .300 विन। गुरुत्व।
कजाख विवाह: परम्परा र परम्पराहरू
सोडा के हो र कसरी खाना पकाउनु?
केवलवे, Manzherok: विवरण, फोटो
एल्म - रूख-बाचेको व्यक्ति
Ariadne Borisov: जीवनी र काम
छेउमा थुक्नु - दैनिक र साँझ
रोग को Polycystic ovaries कारण
वुल्फ-ब्रैग सूत्र। स्पेस लाटिसमा फरक पार्नुहोस्